राती घरमा सुतेका दम्पत्ति ओछ्यानबाटै बेपत्ता : रगतको छिटाले घटना शंकास्पद ! | सुदुरपश्चिम खबर
राती घरमा सुतेका एक वृद्ध दम्पतिलाई महोत्तरीको पिपरामा अज्ञात समूहले आक्रम गरेर बेपत्ता बनाएका छन्। पिपरा गाउँपालिका–५ सहोडवाका ६५ वर्षीय मुसाफिर झा र उनकी श्रीमती ६० वर्षीया गीता देवी झा सुतेको ओछ्यानबाटै हराइरहेका प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुरधामका डीआइजी धिरजप्रताप सिंहले जानकारी दिए।
दुवै जना सुतेको ठाउँ नजिकै रगतको छिटा देखिएकोले उनको हत्या गरेर शव बाहिर लगेर फालेको हुन सक्ने गाउँले आशंका गरेका छन्।‘कसैले अपहरण गरेर बेपत्ता बनाएको हुन सक्ने हाम्रो शंका छ’, डीआईजी सिंहले भने, ‘उनको आगनमा रगतको छिटा देखिएको छ। त्यसले घटनालाई झन् शंकास्पद बनाएको छ।’ घटनाको चौतर्फी अनुसन्धन भइरहेको उनले जनाए।
ईलाका प्रहरी कार्यालय ढल्केबर धनुषबाट तालिम प्राप्त कुकुर सहितको प्रहरी टोली परिचालन गरिएको छ। झा दम्पतिलाई कसले, किन बेपत्ता बनायो ? भन्ने कुरा नखुलेको प्रहरीले जनाएको छ। वृद्ध दम्पति सुतेको घरलाई प्रहरी टोलीले घेराबन्दी गरेर अनुसन्धान थालेको छ।
घटनाको अनुसन्धानका क्रममा दुईजनालाई नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीका डीएसपी प्रकाश विष्टले जानकारी दिए ।
दम्पतिलाई आक्रमण गरी बेपत्ता पारिएको भन्दै स्थानीयले जलेश्वर–जनकपुर टायर बाल्दै सडक अवरुद्ध गरेका छन्। घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ। सोमबार राति खाना खाएर मोसाफिर र गीतादेवी आफ्नै घरमा सुतेका थिए। अबेर बिहानसम्म सुतेर नउठेपछि उनकी बुहारी उषा देवी कोठभित्र खोजी गर्न पसेकी थिइन्।
सासु–ससुरालाई राती खाना खुवाएर उनी आफ्नो कोठामा छोराछोरीलाई लिएर सुत्न गएकी थिइन्। वृद्ध दम्पति नभेटिएपछि उनले खोजविनका लागि बिहानै गाउँलेसँगै प्रहरीलाई खबर गरेकी थिइन्। अदालतमा विचाराधीन रहेको मोहीसम्बन्धी एउटा जग्गा विवादमा यी दम्पति साक्षी बसिरहेका व्यक्ति हुन्। उक्त जग्गावालासँग केही दिन पहिले झा दम्पतिको विवादसमेत भएको स्थानीयले बताए।